२०७८ श्रावण २ शनिबार
बेलुकी ७:१८ बजे
न्यूज ब्यूरो, काठमान्डौं । पछिल्लो २४ घण्टामा थप एक हजार ८७५ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार १० हजार ६६ जनामा कोरोना परीक्षण गरिएको थियो । सोही अवधिमा २ हजार १६४ जना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन् ।
हालसम्म पीसीआर विधिबाट गरिएको परीक्षणमा ६ लाख ६५ हजार ८८६ जना र एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा ४८ हजार ३६२ सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ ।
यस्तै हालसम्म सङ्क्रमितमध्ये ६ लाख ३० हजार ४०७ जना निको भएका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोनाबाट थप २१ को मृत्यु भएसँगै हालसम्म सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको कूल सङ्ख्या ९ हजार ५२७ पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
डा. सिके राउत नेतृत्वको राजनीतिक पार्टी जनमत पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष बसन्त कुशवाहालाई पार्टीमा बलियो पिलरको रुपमा मानिन्छ । पार्टीलाई भिजनरी बनाउनको लागि ई. कुशवाहाको योग्दान अविस्मरणीय रहनेछ । पेशाले इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर